Raw Lorcaserin Hydrochloride Hemihydrate ntụ ntụ (856681-05-5) Phcoker
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ntụ ntụ bụ …….
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5) Nkọwapụta
Product Name Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate uzuzu
Chemical Aha Lorcaserin hydrochloride, (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride hemihydrate; (R) -8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1h-3-benzazepine hydrochloride hemihydrate
Klaasị ọgwụ ọjọọ 5-HT2C onye nkwụnye ihe nkwụnye ihe
molekụla Fnhazi C22H32Cl4N2O
molekụla Wasatọ 482.31
Nkịtị Monoisotopic 480.1268745
Mgbu Point Enweghị data dị
Ọkara Ndụ nke Ndụ Lorcaserin nwere ọkara ndụ plasma nke 11 awa
Solubility Mgbaze mmiri 0.0709 mg / mL
nchekwa Tigwe Enweghị data dị
Antinye Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ntụ ntụ eji dị ka ọgwụ mgbochi oke ibu. O nwere ọrụ dị ka onye agụụ na-agụ agụụ na agonist serotonergic.
Mpekota hemihydrate nke Lorcaserin hydrochloride bụ hydrate nke bụ ụdị hemihydrate nke lorcaserin hydrochloride. Eji ya mee ọgwụ. Ọ nwere ọrụ dịka onye nkoropụ agụụ na onye agonist serotoneric. O nwere ihe odide hydrochloride.
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ntụ ntụ bụ iji mee ihe maka oke ibu nke cholesterol dị elu, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ ụdị 2 ọrịa shuga.
FDA kwadoro Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ntụ ntụ maka ndị mmadụ buru oke ibu (nke nwere oke nkesa, ma ọ bụ BMI, nke 30 ma ọ bụ karịa) ma ọ bụ ndị buru ibu (nke nwere BMI nke 27 ma ọ bụ n'elu) ma nwee ọ dịkarịa ala otu ibu- nsogbu ahụike dịka ụdị ọrịa shuga 2, ọbara mgbali elu ma ọ bụ cholesterol dị elu.
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na ịchịkwa agụụ - kpọmkwem site n'ịkwalite ụbụrụ ụbụrụ maka serotonin, nke na-eme ka mmetụta nke satiety na afọ ojuju kpatara. Serotonin na-emetụta ọnọdụ; ọtụtụ ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa antidepressant na-arụ ọrụ site na igbochi nlọghachi nke serotonin ma na-echekwa ụbụrụ na-ehicha na chemical. Ndị nchọpụta na Arena na-ekwu na ọgwụ ha na-eme iji chọpụta naanị ndị na-anabata serotonin na-emetụta agụụ.
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ntụ ntụ (856681-05-5) Usoro nke Action
A kwadoro Lorcaserin iji belata nri oriri ma kwalite satiety site na ịmepụta ndị natara 5-HT2C na pro-opiomelanocortin neurons nke dị na hypothalamus. A maghị usoro usoro nke a.
Lorcaserin na ntinye ụbọchị a na-atụ aro ya na ndị na-anata 5-HT2C na nzaghachi 5-HT2A na 5-HT2B (lee 5 Table), subtypes nke ntinye 5-HT nke ọzọ, onye natara 5-HT na saịtị 5-HT .
ngwa nke polkloride hydrochloride hemihydrate (856681-05-5)
Onye na-enye obi ụtọ: Onye na-eme ihe iji belata agụụ.
serotonergic agonist: Otu onye na-ahụ maka ndị na-anabata serotonin ma nwee ike ịkọ mmetụta nke serotonin site na ịme ka ọrụ ahụike dị na ndị nabatara cell. A na-eji agonists Serotonin mee ihe dị ka antidepressants, anxiolytics, na ịgwọ ọrịa ọrịa migraine.
Na-atụ aro polkloride hydrochloride hemihydrate (856681-05-5)
Ebe ọ bụ na enweghi ike ịchọta ihe ọmụma dị mkpa banyere iji Lorcaserin hydrochloride hemihydrate, ihe ndị na-esonụ bụ maka ntụle naanị:
Akwukwo nke 846589-98-8 na-abịa na mbadamba ụrọ ma na-ewere 1-2 ugboro ugboro n'ụbọchị, na-enweghị nri. A ghaghị iji mpaghara a na-eji cacarie eme ihe na usoro ihe omumu.
Ụdị a na-atụ aro maka ụbụrụ bụ 10 mg na-eji ọnụ ekwu ugboro abụọ n'ụbọchị. Enwere ike ịnabata Lorcaserin n'emeghị nri. A ghaghị ịkwụsị na ndị ọrịa bụ ndị na-emezughị iji nweta 5% nhalata ọnwụ site na izu 12 ebe ọ bụ na ndị ọrịa a agaghị enwe mmerụ ahụ dị mkpa na ọgwụgwọ na-aga n'ihu.
uru nke Fọl hemihydrate Lorcaserin hydrochloride (856681-05-5)
Ọkpụkpụ hemihydrate Lorcaserin hydrochloride bụ onye na-emepụta aghara aghara nke 5-HT2C nke a na-eche iji belata nri oriri site na usoro POMC kachasị. Lorcaserin HCL ntụ ntụ uru:
A na-eji ntụ ntụ hemihydrate Lorcaserin hydrochloride mee ihe na nri na mmega ahụ iji na-emeso oke ibu.
A na-ejikarị mmiri na-eme ka a na-ejikarị mmiri ozuzo na-agwọ ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ntụ ntụ agaghị agwọ ọrịa ọ bụla (dịka ọrịa obi, ọrịa shuga, ọbara mgbali elu).
mmetụta nke polkloride hydrochloride hemihydrate (856681-05-5)
A na-eji Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ntụ ntụ mee ihe maka ọgwụgwọ nke ịdị arọ na-adịghị ala ala na ndị okenye nwere nchịkọta anụ ahụ (BMI) nke 30 ma ọ bụ karịa (obese) dị ka mgbakwunye na nri na kalori na-ebelata. A kwadoro ya ka ndị okenye nwere BMI nke 27 ma ọ bụ karịa (buru ibu) ma nwee opekata mpe otu ọnọdụ metụtara oke dị ka ọbara mgbali elu (ọbara mgbali elu), ma ọ bụ cholesterol dị elu (dyslipidemia). Agbanyeghị, ọ nwekwara ike ịnwe ụfọdụ nsonaazụ. Dị ka n'okpuru:
Tọ bụ mmetụta kachasị emetụta ya:
-Hypoglycemia (ọbara ọbara ala).
Ihe ndị ọzọ na-adịghị ahụkarị ma ọ bụ dị egwu na-emetụta ya na lorcaserin gụnyere:
- Nsogbu valve ụkwụ,
- Ngbanwe na anya ma ọ bụ ebe nchekwa,
- Nsogbu uche,
-Dress or echiche nke igbu onwe,
-Akwado ihe ndi ozo,
-Ka obi ghara iru gi ala,
-Abelata ụlọnga ọbara, na
-Anwekwu na hormone, prolactin.